Nimcooyinka Eebbe waa nimcada ay mudan tahay in Eebbe diyaar u yahay inuu wax walba oo abuurtiisa abuuray. Dareenka guud, nimcada Ilaah ayaa lagu muujiyaa ficil kasta oo is-muujinta rabbaaniga ah. Thanks to nimco, nin iyo cosmos oo dhan ayaa laga badbaadiyay dembiga iyo dhimashada Ciise Masiix, waxaana mahad leh nimcada dadku waxay leedahay awood ay ku gaaraan Ilaah iyo Ciise Masiix (isagu) wuu yaqaan wuuna jecel yahay oo wuxuu ku galayaa farxadda badbaadada weligeed ah ee boqortooyada Ilaah. (Kolosay 1,20; 1 Yooxanaa 2,1-2; Rooma 8,19-21; 3,24; 5,2.15-17.21; Yooxanaa 1,12; Efesos 2,8-9; Tiitos 3,7)
"Hadday xaqnimo sharciga ka timaado, Masiix micnela'aan buu u dhintay" Bawlos wuxuu ku qoray Galatiya 2,21. Beddelka kaliya, ayuu isla aayadaas ku sheegay, waa "nimcada Eebbe". Waxaan ku badbaadiyey nimco, ee kuma ilaalino sharciga.
Kuwani waa qaabab kale oo aan la isugayn karin. Annagu kuma badbaadin nimco lagu daray shaqooyinka, laakiin waxaa lagu badbaadiyaa nimco keliya. Bawlos wuxuu caddeeyay inay tahay inaan dooranno mid ama mid kale. Labadan xulasho ma ahan ikhtiyaar (Rooma 11,6). «Maxaa yeelay, haddii dhaxalka lagu heli lahaa sharciga, laguma bixin doono ballanqaad; Laakiin Ilaah wuxuu Ibraahim ugu ballanqaaday si xor ah ballanqaad (Galatiya 3,18). Badbaadadu kuma eka sharciga, laakiin waxay ku timid nimcada Ilaah.
"Kaliya haddii sharci la bixiyo kaas oo wax noolayn kara kaliya ay cadaaladdu sharciga ka timaaddo" (V. 21). Haddii ay jirto jid loo helo nolosha weligeed ah iyadoo la dhawro amarada, Ilaah wuxuu nagu badbaadin lahaa sharciga. Laakiin taasi may suurta gal ahayn. Sharcigu cidna ma badbaadin karo.
Ilaah wuxuu rabaa inaan lahaanno dabeecad wanaagsan. Wuxuu rabaa inaan jeclaano dadka kale oo aan sidaas ku buuxino sharciga. Laakiin isagu ma doonayo inaan ka fikirno inay shuqulladeennu weligeen sabab u yihiin badbaadadeenna. Bixinta nimcadiisa waxay muujineysaa inuu waligiis ogaa inaanan "wanaag ku filnaan doonin" inkasta oo aan dadaalkeenna ugu wanaagsan ku bixinno. Haddii shaqooyinkeennu badbaadada ku darsadaan, markaa waxaan leenahay wax aan ku faanno. Laakiin Ilaah wuxuu qorsheeyey qorshihiisa badbaadada si aynaan u sheegan karin wax u qalma badbaadadeenna (Efesos 2,8: 9). Marna ma sheegan karno in aan wax uun kasbanno. Marna ma dhihi karno in Eebbe wax nagu leeyahay.
Tani waxay taabaneysaa xudunta iimaanka Masiixiga waxayna ka dhigaysaa masiixiga mid gaar ah. Diimaha kale waxay sheeganayaan in dadku fiicnaan karaan haddii ay isku dayaan si ku filan. Masiixiyaddu waxay leedahay si fudud uma noqon karno dad ku filan. Waxaan u baahan nahay naxariis.
Waligeen kufiicnaan mayno si kufilan, sidaas darteedna diimaha kale weligood kuma fillaan doonaan. Sida keliya ee lagu badbaadi karaa waa nimcada Ilaah. Marna uma qalmi karno inaan weligeen noolaano, sidaa darteed dariiqa kaliya ee aan ku gaari karno nolosha weligeed ah waa iyadoo Eebbe ina siinayo wax aan u qalmin. Tani waa waxa Bawlos ujeedo u leeyahay markii uu adeegsanayo ereyga nimcada. Badbaadadu waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, oo ah wax aannan waligeen kasban karno - xitaa iyada oo aan amarada la haynin kumanaanta.
Ciise iyo nimco
"Waayo, sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse," ayuu qoray Yooxanaa, wuxuuna ku sii socdaa: "Hadiyadda iyo runtu waxay ku yimaadeen Ciise Masiix" (Yooxanaa 1,17). Yooxanaa wuxuu arkay farqiga u dhexeeya sharciga iyo nimcada, iyo waxa aan sameyno iyo waxa lay na siinayo.
Haddana Ciise ma uusan adeegsan ereyga nimco. Laakiin noloshiisa oo dhami waxay ahayd tusaale nimco, masalooyinkiisuna waxay muujinayaan nimco. Wuxuu mararka qaar adeegsaday ereyga naxariis si uu u qeexo waxa Eebbe ina siinayo. "Waxaa barakaysan kuwa naxariista leh," ayuu yidhi, "waayo, iyagu naxariis bay heli doonaan" (Matayos 5,7). Qoraalkan, wuxuu cadeeyay inaan dhamaanteen u baahan nahay naxariis. Oo wuxuu xusay in aan noqonno sida Ilaah ee arrintan la xiriira. Haddii aan qiimeynno nimcada, waxaan sidoo kale u muujin doonnaa naxariis dadka kale.
Markii dambe, markii Ciise la weydiiyay sababta uu ula shirayo dembiilayaal caan ah, wuxuu dadkii ku yidhi: "Laakiin taga oo barta macnaheeda: anigu waxaan ku faraxsanahay naxariista ee kuma bixin allabariga" (Matayos 9,13:6,6, xigasho ka timid Hoosheeca). Ilaah wuxuu aad uga walaacsan yahay naxariis muujinta in kaamil ahaanshaha lagu dhawro amarada.
Ma rabno dadku inay dembaabaan. Laakiin maadaama ay xad-gudubyadu yihiin lama huraan, naxariis waa lama huraan. Tani waxay khusaysaa xidhiidhkayaga dhexdooda ah iyo sidoo kale xidhiidhka aan la leenahay Ilaah. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan garowno baahida aan u qabno naxariis iyo sidoo kale inaan u muujinno dadka kale naxariis. Ciise wuxuu bixiyay tusaale sidan ah markii uu wax la cunay cashuurqaadayaasha oo uu lahadlay dembilayaashu - dabeecadihiisii ​​ayuu tusay in Eebbe doonayo inuu wada lahaado dhammaanteen. Wuxuu qaatay dembiyadeenna oo dhan oo uu inaga cafiyey inaan haysano beeshan.
Ciise wuxuu ka hadlay masaal laba deyn qaba, mid wuxuu ku leeyahay lacag aad u badan, kan kalena wuxuu ku lahaa lacag aad u yar. Sayidkiisii ​​ayaa saamaxay addoonkaas badan oo uu isagu ku lahaa, laakiin addoonkaas wuu ka cafiyey midiidinkii kale ee lagu lahaa. Sayidkiina wuu cadhooday oo wuxuu ku yidhi: miyaadan u naxariisan addoonkaaga saaxiibkiis ah sidaan kuugu naxariistay oo kale? (Matayos 18,33).
Casharka tusaalahan: Midkeen kastaaba waa inuu isku arkaa nafteenna sidii addoonkii ugu horreeyay oo lagu abaalmariyey wax badan. Waxaan ka fog nahay inaan ka soo baxno shuruudaha sharciga, sidaa darteed Ilaah naxariis buu noogu muujiyay - oo wuxuu doonayaa inuu na tuso natiijada taas darteed. Dabcan, labadaba xagga naxariista iyo sharciga, falalkayagu waxay ku dhacaan wax aan laga fileynin, sidaas darteed waa inaan sii wadnaa aaminaadda naxariista Eebbe.
Muuqaalkii reer Samaariya wanaagsanaa wuxuu ku dhammaaday yeedh naxariis (Luukos 10,37). Cashuurqaadayaasha naxariis weydiisan jiray wuxuu ahaa mid xaq ku ahaa Ilaah hortiisa (Luukos 18,13-14). Wiilka Khasaaraha ah ee hantidiisa khasaaray ka dibna guriga yimid ayaa la aqbalay isaga oo aan samayn wax "u qalmo" (Luukos 15,20). Carmalkii Nain iyo wiilkeedii midkoodna ma sameyn wax istaahila in la sara kiciyo; Ciise wuxuu u sameeyay naxariis uun (Luukos 7,11-15).
Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix
Mucjisooyinka Ciise ayaa u adeegi jiray si ay u buuxiyaan baahiyaha ku meelgaarka ah. Dadkii cunay kibistii kalluunka iyo kalluunku mar dambe ayay gaajoodeen. Wiilkii la sara kiciyey ayaa aakhirkii dhintay. Laakiin nimcada Ciise Masiix waxaynu dhammaanteen innaga helnaa iyada oo loo marayo ficillada ugu sarreeya ee nimcooyinka rabaani ah: dhimashadiisa uu u bixiyo iskutallaabta dusheeda. Sidan, Ciise naftiisuu innaga innaga siiyey - iyada oo cawaaqib weligeed ah leh halkii cawaaqibka ku meelgaarka ah.
Sidii Butros u yidhi: "Taas bedelkeeda, waxaan rumaysan nahay in nimcadii Rabbi Ciise ku badbaadi doonno" (Falimaha Rasuullada 15,11). Injiilku waa fariin nimcadiisa Eebbe (Falimaha Rasuullada 14,3; 20,24. 32). Waxaynu ku noqonnay nimco "madaxfurashada ku timid Ciise Masiix" (Rooma 3,24). Nimcada Ilaah waxay la xiriirtaa allabarigii Ciise ee iskutallaabta lagu qodbay. Ciisena wuxuu u dhintay aawadeen, dembiyadeenna aawadood, oo waannu ku badbaadi doonnaa wixii uu iskutallaabta ku sameeyey (V. 25). Oo waxaynu ku furannay dhiiggiisa (Efesos 1,7).
Laakiin nimcada Eebbe dhaafsiisan cafis. Luukos wuxuu inoo sheegayaa in nimcada Ilaah ay la jirtay xertii markii ay dadka injiilka ku wacdiyeen (Falimaha Rasuullada 4,33). Ilaah baa iyaga u roonaaday iyaga oo siiyey caawimaad aan iyagu istaahilin. Laakiin aabayaasha aadanaha miyaanay sidaas oo kale samayn? Kaliya ma siinayno carruurteenna markii ay sameeyeen wax aan u qalmin, waxaan sidoo kale siinnaa hadiyado aysan u qalmin. Waa qayb ka mid jacaylka waxayna ka tarjumaysaa dabeecadda Eebbe. Nimco waa deeqsinimo.
Markay jameecadii Antiyokh ee Antiyokh u direen Bawlos iyo Barnabas safar safar ah, waxay ku amreen nimcada Ilaah (Falimaha Rasuullada 14,26:15,40;). Si kale haddii loo dhigo, waxay ku amreen inay daryeelaan Ilaah, iyagoo aamminsan in Ilaah daryeelayo safarka iyo inuu iyaga siinayo wixii ay u baahdaan. Taasi waa qayb ka mid ah nimcadiisa.
Hadiyadaha ruuxiga ah sidoo kale waa shaqo nimco leh. "Waxaan haynaa hadiyado kala duwan" ayuu Bawlos qoray, "sida ay tahay nimcada naloo siiyay" (Rooma 12,6). Midkeen walba waxaa lasiiyay nimco sida loogu qiyaaso hadiyada Masiixa (Efesos 4,7). Midkiinba midka kale ha ugu adeego, midkiin waluba ha ku helo hadiyadda uu helay, idinkoo ah wakiilka wanaagsan ee nimcada Ilaah oo badan " (1 Butros 4,10).
Bawlos wuxuu Ilaahay uga mahadceliyey hadiyadaha ruuxiga ah ee uu hodan u siiyay kuwa rumaysta (1 Korintos 1,4: 5). Wuxuu ku kalsoonaa inay nimcada Ilaah ku badnaan doonto iyaga oo u saamaxay inay sii kordhiyaan xitaa wax kasta oo wanaagsan oo wanaagsan (2 Korintos 9,8).
Hadiyad kasta oo wanaagsan waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, taas oo ah natiijada nimcada halkii aan u qalanay. Sidaa darteed waa inaan uga mahad celineynaa ducooyinka ugu fudud, heesta shimbiraha, urta ubaxa iyo qosolka carruurta. Xitaa noloshu waa raaxo nafteeda, maahan baahi.
Bawlos shaqadiisii ​​waxaa lagu siiyay nimco (Rooma 1,5; 15,15; 1 Korintos 3,10; Galatiya 2,9; Efesos 3,7). Wax kasta oo uu sameeyo wuxuu doonayay inuu sameeyo iyada oo la raacayo nimcada Ilaah (2 Korintos 1,12). Xooggiisa iyo kartidiisa waxay ahaayeen hadiyad nimco leh (2 Korintos 12,9). Haddii Eebbe badbaadin karo oo adeegsado kuwa ugu xun dembiilayaasha (Tani waa sida Bawlos isu sharaxay), runtii wuu cafin karaa midkeen kasta oo wuu ina adeegsadaa. Waxba nagama sooci karo jacaylkiisa, rabitaankiisa ah inuu na siiyo hadiyado.
Sidee ayaan uga jawaabnaa nimcada Ilaah? Nimco, dabcan. Waa inaan u naxariisano, sida Eebbe naxariis buuxda ugu yahay (Luukos 6,36). Waa inaan cafinaa dadka kale, sida loo cafiyey. Waa inaan u adeegno kuwa kale sidii la iigu adeegay. Waa inaan u naxariisnaa dadka kale anagoo u tusin wanaag iyo naxariis.
Erayadeenu waa inay nimco ka buuxaan (Kolosay 4,6). Waa inaanu noqonnaa naxariis iyo naxariis, is cafiya oo iska cafiya xagga guurka, ganacsiga, shaqada, kaniisadda, xagga asxaabta, qoyska iyo shisheeyaha.
Bawlos wuxuu kaloo ka hadlay deeqsinimada lacageed inay tahay shaqo nimco leh: “Laakiin waxaannu idin ogeysiinaynaa, walaalaha qaaliga ahow, nimcada Ilaah oo laga siiyo kiniisadaha Makedoniya. Farxaddooda aawadeed waxay ahayd mid aad u faraxsan markii lagu tijaabiyey dhibaatooyin badan, iyo in kastoo ay aad u liitaan, haddana waxay ku bixiyeen wax badan oo fudud. Sababta oo ah sida ugu fiican ee ay awoodaan, waxaan u markhaati furayaa, oo xitaa in ka badan xooggooda ay si ikhtiyaar ah u bixiyeen » (2 Korintos 8,1: 3). Wax badan ayay heleen oo markii dambe diyaar u ahaa inay wax badan bixiyaan.
Bixintu waa ficil nimcaysan (V. 6) iyo deeqsinimo - ha ahaato xagga dhaqaalaha, waqtiga, ixtiraamka ama si kale - waana dariiqa ugu habboon ee aan uga jawaabno nimcada Ciise Masiix ee naftiisa na siiyey si aan u noqon karno waa lagu duceysan karaa (V. 9).